Baidoa Media Center » Faah faahin, qaraxyo lagu hoobtay oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Faah faahin, qaraxyo lagu hoobtay oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
September 20, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa qasaaraha ka dhashay qaraxyo naftii halignimo ah oo maqribnimadii caawa lala eegtay maqaayad lagu shaaho oo ku taala magaalada Muqdisho ayadoo sidoo kalena aynu helnay magacyada wariyeyaasha goobta ku waxyeeloobay.
Rasmiyan tirada qaraxyada looma xaqiijin karo balse waxaa la xaqiijiyey iney ahaayeen kuwo ay fuliyeen laba ruux oo qaraxyo lagusoo xeray kuwaasi oo iyagu isku qarxiyey goobaha ay dadku kaga badnaayeen maqaayadan oo lagu magacaabo Vilage oo ku dhegan guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho.
Dadka goobta ku dhintay waxey tiro ahaan gaarayaan 14ruux ayadoo dadka goobta ku dhaawacmayna ay tiro ahaan kor u dhaafayaan 20 ruux waxaana dadka goobta ku waxyeeloobay ku jiray wariyeyaal.
Magacyada wariyeyaasha aynu helnay iney goobta ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah Allaha U naxariistee Liibaan Cali Nuur oo ahaa madaxii wararka ee Telefishinka Qaranka, Cabdi Sataar Daahir Sabriye oo ahaa Madaxii Barnaamijyada Telefishinka Qaranka, C/raxmaan Yaasiin oo ahaa Agaasimahii VOD Radio Xamar.
Wariyeyaasha iyana goobta ku dhaawacmay waxaa ka mid ah Maxamed Xuseen Gentelman oo ka tirsanaa Wariyeyaasha ka howlgalla Telefishinka iyo Raadiyaha Qaranka, Suldaan iyo Shiine oo iyaguna ka wada tirsanaa Radio Kulmiye iyo C/kariin Guutaalle waxaana dhaawacyadooda lakala gaarsiiyey isbitaallada Madiina iyo Daarul-Shifa ee magaalada Muqdisho.
Dadka goobta ku dhintay waxey u badan yihiin dad rayid ah oo maqaayada ka shaahayey kuwaasi oo meydadkooda ilaa hada ay gaadiidka gurmadka deg dega ah goobta ka daabulayaan.